Q: तपाईं कसरी हामी प्राप्त राम्रो गुणस्तर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: पहिले, हामी उत्पादन समाप्त सम्म कच्चा सामाग्री देखि गुणस्तर नियन्त्रणको लागि QC विभाग छ। दोश्रो, हामी Inpsection उत्पादन समयमा र उत्पादन पछि के हुनेछ। तेस्रो, हाम्रो सबै उत्पादनहरु पैकिंग र बाहिर पठाउनु अघि परीक्षण गरिने छ। ग्राहक personly जाँच लागि आ भने हामी निरीक्षण वा परीक्षण भिडियो पठाउन हुनेछ।
Q: warrenty के?
एक: हाम्रो सबै उत्पादन जीवन-लामो मर्मत सेवा संग 1 वर्ष warrenty भइरहेको। हामी मुक्त प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ।
Q: तपाईं उत्पादन सञ्चालन सन्दर्भमा कुनै पनि मद्दत प्रदान गर्नुहुन्छ?
एक: उत्पादनहरु परिचय, अंग्रेजी मा नियमावली जो प्रयोग समयमा सबै सञ्चालन सुझाव र मर्मत प्रस्ताव भएको छ भित्र सबै मिसिन। यसैबीच, हामी पनि अन्य तरिका तपाईंलाई समर्थन गर्न सक्छ, जस्तै तपाईं भिडियो, देखाउनुहोस् प्रदान गर्न र अनुरोध यदि तपाईं हाम्रो कारखाना वा आफ्नो कारखाना हाम्रो ईन्जिनियरहरु मा हो, जबकि तपाईं सिकाउनुहोस्।
Q: म कसरी स्पेयर पार्ट्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: हामी केही द्रुत पहनने भागहरु आफ्नो अर्डर संग, मुक्त उपकरण बक्स मा आफ्नो आदेश wtih सँगै पठाउन गरिनेछ जो यस मिसिन लागि केही आवश्यक उपकरण वरिपरि बार लाउनु हुनेछ साथै। हामी एक सूची संग म्यानुअल भित्र चित्रकला सबै स्पेयर पार्ट्स छ। तपाईं बस हामीलाई आफ्नो स्पेयर पार्ट्स न भविष्यमा बताउन सकेन। हामी तपाईंलाई सबै बाटो समर्थन गर्न सक्छ। यसबाहेक, मिसिन cutters beveling बिभेल उपकरण र सम्मिलित लागि, यो मिसिन लागि प्रकारको comsumable छ। यसलाई सधैं सबै दुनिया भर स्थानीय बजार मा easyly पाउन सक्नुहुन्छ जो नियमित ब्रान्डहरु अनुरोध।
Q: तपाईंको वितरण मिति के हो?
एक: यो नियमित मोडेल लागि 5-15 दिन लाग्छ। र अनुकूलित मिसिन लागि 25-60 दिन।
Q: म कसरी यो मिसिन वा silimars बारेमा थप विवरण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
एक: Pls तल तल जांच बक्स मा आफ्नो प्रश्न र आवश्यकताहरु लेख्नुहोस्। हामी जाँच र 8 घण्टा मा इमेल वा फोन गरेर तपाईं जवाफ हुनेछ।